ယုန်လေးနဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့ပုံစံကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောနေကြတဲ့သူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဒဲ့ပြောလိုက်ပြီ – Cele Lover
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေလူလူချင်းး တူတယ်။ မတူတာ စိတ်ဓာတ်။ သတင်းတော်တော်များများးမှာ ဇာတ်လိုက် မြင့်မြတ် ကို B.L.A.M.E နေကြတယ်။ နောက်ပီးးး လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာလဲ Speak out မလုပ်လို့ဆို ပြီးးး ပြောသံတွေကြားးနေရတယ်။
နားးးမခံသာလို့. ရေးရခြင်းးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဗျ.yonelay နဲ့ပေါင်းးတိုင်းး သူ့လိုမထင်လိုက်နဲ့ဗျ့။ ဇာတ်လိုက်က ဇာတ်လိုက် လူဆိုးက လူဆိုးးး။ပေါ်ပင်လိုက် တစက်မှအချိုးးမပြေတဲ့ yonelay နဲ့နှိုင်းးရင် နှိုင်းးတဲ့သူရိုင်းးမှာပဲ။
ဘောလုံးးးစကားးနဲ့ မြင်သာထင်သာရှိအောင်ပြောရရင်တော့မြင့်မြတ် အနေထိုင်က မက်ဆီလိုပဲဗျ့။ သူလုပ်စရာရှိတာ သူလုပ်တယ်။အနေအေးးတယ်ပေါ့ဗျာ။ မန်းးးလေးးက မြင့်မြတ်သူငယ်ချင်းးးက ပြောတယ်ပြည်သူနဲ့ တစ်သားးးထဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ နေ့တိုင်းးးတွေ့တယ်တဲ့.. ဆိုတော့လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်..မှာ. ပုံရိုက်တင်ပီးးး ပြန်သွားးးတဲ့သူထက်စာရင်
ကျနော်တို့ဇာတ်လိုက်ကြီးးး က တကယ်ကိုလဲ အပြင်မှာဇာတ်လိုက်ကျော် ပြည်သူနဲ့တစ်သားထည်းးပါ။ အသားးလွတ် ဝေဖန်နေသူတွေကို မြင့်မြတ်လေသံနဲ့ပြောလိုက်မယ်.. “ဟျောင့် ဂျင်းကောင်မင်းးက ဒိုးးခပဲ”
မဂၤလာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရလူလူခ်င္းး တူတယ္။ မတူတာ စိတ္ဓာတ္။ သတင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားးမွာ ဇာတ္လိုက္ ျမင့္ျမတ္ ကို B.L.A.M.E ေနၾကတယ္။ ေနာက္ပီးးး လူမႈ႔ကြန္ယက္ေပၚမွာလဲ Speak out မလုပ္လို႔ဆို ၿပီးးး ေျပာသံေတြၾကားးေနရတယ္။
နားးးမခံသာလို႔. ေရးရျခင္းးျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဗ်.yonelay နဲ႔ေပါင္းးတိုင္းး သူ႔လိုမထင္လိုက္နဲ႔ဗ်႕။ ဇာတ္လိုက္က ဇာတ္လိုက္ လူဆိုးက လူဆိုးးး။ေပၚပင္လိုက္ တစက္မွအခ်ိဳးးမေျပတဲ့ yonelay နဲ႔ႏွိုင္းးရင္ ႏွိုင္းးတဲ့သူရိုင္းးမွာပဲ။
ေဘာလုံးးးစကားးနဲ႔ ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ျမင့္ျမတ္ အေနထိုင္က မက္ဆီလိုပဲဗ်႕။ သူလုပ္စရာရွိတာ သူလုပ္တယ္။အေနေအးးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ မန္းးးေလးးက ျမင့္ျမတ္သူငယ္ခ်င္းးးက ေျပာတယ္ျပည္သူနဲ႔ တစ္သားးးထဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ေန႔တိုင္းးးေတြ႕တယ္တဲ့.. ဆိုေတာ့လူမႈ႔ကြန္ယက္ေပၚ..မွာ. ပုံရိုက္တင္ပီးးး ျပန္သြားးးတဲ့သူထက္စာရင္
က်ေနာ္တို႔ဇာတ္လိုက္ႀကီးးး က တကယ္ကိုလဲ အျပင္မွာဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ ျပည္သူနဲ႔တစ္သားထည္းးပါ။ အသားးလြတ္ ေဝဖန္ေနသူေတြကို ျမင့္ျမတ္​ေလသံနဲ႔ေျပာလိုက္မယ္.. “ေဟ်ာင့္ ဂ်င္းေကာင္မင္းးက ဒိုးးခပဲ”
Previous Article ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်း ကိုမြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပါ ကြော်ကြားခဲ့အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြန်လည်သီဆိုထားကြောင်း…..
Next Article မျက်ကွင်းညိုတာကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း ၂ သွယ်